Ziyini izinzuzo zokukhokhela ukusebenza kwe-SEO?
Namuhla, ukuze uhlale usebenza emakethe yokuncintisana, udinga ukwakha umkhankaso wokwenza umsebenzi wokuwina. Ukubaluleka kokusebenza kwe-injini yokusesha akukwazi ukunconywa njengoba kuyindlela eyodwa kuphela yokukhishwa kwezinto ezithengekayo ezenza abanikazi bewebhu bakwazi ukuphinda kabili imali yabo. Kuyinto ithuluzi lokuthengisa eliphumelela kunazo zonke elingenza ngcono ukutholakala kwebhizinisi le-intanethi nokuheha ithrekhi ehlosiwe kumasayithi webhizinisi webhusayithi. Uhlelo lokusebenza olufanele oluhambisana namasu akho okukhuthazwa kwebhizinisi lungakhuphula kakhulu ukubuyisa kwakho ekutshalweni nasekukhuthazeni ukuthengisa.
Amasevisi wokwenza umsebenzi ophambili
Namuhla, amabhizinisi amaningi asebenzisa amasu okuthengisa we-SEO namathuluzi wokuthuthukisa. Iphakamisa ukufunwa kwabanikezeli be-SEO abanikezela ngamasu amakhono okusebenzisa ama-SEO amathuluzi amasha kanye nezobuchwepheshe zanamuhla ezizokhiqiza izimoto ezihlosiwe futhi zikhange izinjini zezinga eliphezulu lekhasi. Ukukhokhela ukusebenza kwe-SEO kubhekisela ezinsizakalweni zobuchwepheshe zokusungula injini ezinikezwa ochwepheshe be-SEO abanolwazi lokubeka isikhundla se-website ngesayithi elihle kakhulu elizoheha ithrafikhi ehlosiwe engayiguqula ekuthengiseni nasekuholeni. Ngakho-ke, ukuze uhlangabezane nezidingo zebhizinisi lakho, udinga ukuqasha okungcono kakhulu abahlinzeki benkonzo be-SEO.
Enye yezinzuzo eziphawulekayo zokusebenza kwe-search engine yokukhokhela ukukhokhela ukukhokhela ukukhokhela ukuthi udinga ukukhokha kuphela ngenxa yokulethwa kwemiphumela emihle. Ingakwazi ukuvikela ibhizinisi lakho ekuchitheni isikhathi nemali ebuthakathaka futhi engafanelekile kumasevisi ebhizinisi lakho. Kusho ukuthi imiphumela emihle ilindeleke ngaphambi kokuba inkokhelo yenziwe. Ngakho, ukusebenza kahle kokukhokhela ukusebenza kuhle ukusebenza njengoba imiphumela ebonakalayo kufanele iboniswe ngaphambi kokukhokha. Yenza izinhlaka ze-injini yokucwaninga injini zenza kuphela imikhuba ye-SEO engcono kakhulu yemiphumela oyifunayo.
Khokha ukusebenza kwezinzuzo ze-SEO
Ngalezi zinsuku, abaningi bebunikazi bewebhu bahilela i-SEO yokusebenza ngokukhokha ngokuhlinzeka ngezinzuzo eziningi ebhizinisini labo. Leli fomu lokukhuthazwa kwebhizinisi liyadingeka kakhulu kumabhizinisi asanda kuqaliswa namasendaweni anebhajethi elinganiselwe.
Ukukhokhelwa kwe-SEO kungase kuqinisekiswe imiphumela emihle efunwa yamabhizinisi njengababonisi be-SEO abanolwazi ngokuzikhethela ngezindlela eziphumelelayo kakhulu zokuthuthukisa nokwenza ngcono i-inthanethi yebhizinisi nokuthuthukisa ithrekhi kwiwebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe be-SEO bavame ukubona izakhi ezintsha zamakethe zedijithali zakamuva kanye namathuluzi okusebenza ngokuphumelelayo kakhulu kanye nezixazululo eziyinkimbinkimbi ezingabangela ukuthuthukiswa kwesayithi ye-SEO.
Inzuzo eyodwa yokukhokhelwa kokusebenza i-SEO yukuthi inikeza isakhiwo sempahla eguquguqukayo ngaphandle kwemigodi kanye nezinyathelo zokukhwabanisa. Kodwa-ke, banikeza ithuba lokuba amabhizinisi acele noma yiziphi izici ezingaphezulu uma kunezimali eziningi ezitholakalayo. Ngaphezu kwalokho, ngeke ulahlekelwe yimali yakho uma amasevisi wokwenza umsebenzi wokukhokhisa angakuletheli imiphumela.
Noma kunjalo, abathengisi be-intanethi kufanele bajwayelane nezici zokusungula injini yokusesha kanye namanvelties kule ndawo ukuze baxoxe ngezindlela ezinhle kakhulu ze-SEO nezinkonzo ezizokwamukelwa emkhankasweni wabo wokuphromotha wemiphumela yebhizinisi oyifunayo Source .